Isikhululo sokudlala esikwiselfowuni siyafumaneka nakweyiphi na i-terminal ye-Android I-Androidsis
Enkosi kwakhona kubasebenzisi beforum Xdadevelopers, ndikwazile ukufaka kunye nokusebenza ngempumelelo kwesicelo esitsha se Dlala iSitishi esiSelfowuni efumaneka ngokusemthethweni kuphela kwizixhobo ezimbalwa eziqinisekisiweyo.
Ukuba unomdla kuvavanyo ukuba iyasebenza kwisiphelo sakho Android, ngaphambi kokuba udibane nabanye iimfuno ezithile esiza kukucacisela apha ngezantsi.
1 Iimfuneko zokufaka iSikhululo sokuDlala esiSelfowni
4 Inyathelo lokuqala
5 Inyathelo lokuqala
6 Ingcaciso ebalulekileyo
Iimfuneko zokufaka iSikhululo sokuDlala esiSelfowni
Kuya kufuneka sibe nesiphelo sendlela ye-Android, i-smartphone okanye ithebhulethi, ekufuneka ibenjalo ingcambuoy naye Ukubuyiselwa kwakhona ifakiwe, kuyimfuneko ukuba ne- Ibhokisi lebhokisi ifakiwe kwaye ihlaziyiwe kuhlobo lwayo lwamva nje.
Ngokwesiqhelo ukuba sinesiphelo esiqengqeleka iarom ephekiweyo, i Ibhokisi lebhokisi Ihlala sele ifakwe ngokungagqibekanga, nangona kungakhe kabuhlungu ukuyijonga ngokukhuphela usetyenziso kuyo Ibhokisi ekufakwa kuyo ebhokisini kusuka kwi Play Store.
Iifayile eziyimfuneko kufakelo oluchanekileyo lwefayile ye Dlala iSitishi esiSelfowuni baba zimbini, ifayile enye .APK kunye nefayile ye-zip ecinezelweyo ukufakela ekubuyiseleni okulungisiweyo:
Isikhululo sokudlala Iselfowuni 1.0
Nje ukuba zombini iifayile zikhutshelwe, kufuneka sizikope kwifayile ye- imemori yangaphakathi Isiphelo kwaye uqhubeke nemiyalelo yofakelo.
Indlela yofakelo esiza kuyenza kuyo amanyathelo amabini alula:
Siya kwindlela apho sikhuphela khona ezi fayile zimbini, senza oku nangaye nawuphi na umhloli wefayile, kwaye sisebenzisa i-APK ukuyifaka kwisixhobo sethu, kuya kufuneka kukhunjulwe ukuba kufuneka sikhethe vumela imvelaphi engaziwayo yenziwe kuseto lwenkqubo.
Nje ukuba Dlala iSitishi esiSelfowuni ungazami ukuyiphumeza okanye iya kunika ingxelo ngefayile yefayile ngolu hlobo lulandelayo:
Ngoku kuyakufuneka senze inyathelo lesibini ukulungisa iimvume kunye nokukopa iifayile sikhokelo y aneemvume kwindawo echanekileyo kwinkqubo yethu, siya kwenza oku nge-zip ekopishwe apha ngasentla kwaye siyikhanyise kwi Ukubuyiselwa okuguqulweyo.
Nje ukuba uqalise kwakhona kwi Indlela yokuFumana, kubalulekile ukwenza nandroid yogcino okanye ukhuphelo lwenkqubo yethu yonke xa kunokwenzeka ukuba ukufakela kunye nokudanyaza kwezi fayile zimbini kusinike naluphi na uhlobo lwengxaki, ngale ndlela siya kuphinda sibuyele kwisiphelo se-Android sikarhulumente njengoko sasinaso ngaphambi kwenkqubo yokukhanyisa i-zip.
Nje ukuba nandroid yogcino Siza kuqhubeka nokufaka i-zip ngolu hlobo lulandelayo:
Faka i-zip kwi-sdcard yangaphakathi
Sikhetha i-zip eyayikopishwe ngaphambili kwaye siqinisekisa ukufakwa kwayo.
La manyathelo abaliswe ngasentla ngala ahambelana neefayili ze- Ukubuyiselwa kweClockworkmodUkuba ukuchacha kwakho kwahlukile, amanyathelo ekufuneka enziwe ayafana nokuthiywa igama kwakhona ngohlobo lokubuyisela ozifakileyo.
Esi sicelo siqinisekisiwe kwezinye iipilisi kunye neetheminali Sony kunye noluhlu HTC OneUkuba unayo enye yezi zixhobo, akuyi kuba yimfuneko ukwenza le khokelo, khuphela i-APK kwiwebhusayithi esemthethweni yakwaSony kwaye uyifake ngesiqhelo.
Le ndlela imele ukusebenza nasiphi na isixhobo se-Android, nangona ngalo mzuzu kuvavanyiwe kuphela kwifayile ye- Nexus 7, I-Samsung Galaxy S2 / S3.
Ukuba ulandela amanyathelo kwileta njengoko kubonisiwe kwisifundo, uya kuba nakho ukuyivavanya kwisiphelo sakho ukubona ukuba isebenza ngokuchanekileyo okanye hayi ngaphandle komngcipheko. kubalulekile ukwenza i-nandroid yogcino ekubuyiseni.
Khuphela - Isikhululo sokudlala Iselfowuni 1.0, AndroidPolice_SonyPlayst
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyifaka njani iPlay Station Mobile kuyo nayiphi na ifowuni ye-Android
U-Alexa M sitsho
Ukuba ndingayincothula i-Iconia A500 yam ndiza kuyizama ukubona ukuba injani. Okwangoku ndiyakhuphela kwaye ndivavanye kwi-S2
Phendula ku-Alexa M
Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, landela imiyalelo kwaye wenze isipele se-nandroid.
Uya kusixelela umbono wakho.
Nge-24/04/2013 ngo-14: 49, «Disqus» wabhala:
UFernando Mirrey Schulz sitsho
Ndinayo i-A500 kwaye ndisajonge ukuyingcambu -_-
Phendula uFernando Mirrey Schulz
Kwi-HTCMania kukho i-sufboro yolu Cwecwe kunye nee-tutorials zendlela yokuyiqala.
UJoseph Cruz sitsho
Uvavanywe kwi-Xperia Acro S ngeCyanogenmod 10 kwaye isebenza nge-100%
Phendula uJoseph Cruz
UDaniel Gonzalez sitsho
Ukuvavanywa kwi-SGS GT-I9000 kusebenza ngokugqwesileyo. kodwa ndiyifumana njani imidlalo yasimahla ??
Phendula kuDaniel Gonzalez
molo enkosi kakhulu kuvavanywa kwi-asus tf300t ithebhulethi ene-asus yoqobo 4.2.1 rom. ukusebenza 100%
Uvavanywe kwi-LG OPTIMUS 3D 100%
Uvavanywe kwiGalaxy Note 8 100%